Izindaba - Khulisa imvamisa yokuhlola yabasebenzi abahlobene namakhaza abandayo
NgoDisemba 9, uZhejiang wabamba umhlangano wabezindaba wokuvimbela nokulawula umhlangano omusha we-58th. Abantu abafanele abaphethe i-Provincial Leading Group Office of Prevention and Control kanye ne-Provincial Market Supervision Bureau bethule isimo sokuxhumanisa nokukhuthaza ukuvimbela ubhubhane kanye nokulawula kanye nentuthuko yezomnotho nezenhlalo.
Intatheli ithole engqungqutheleni yabezindaba ukuthi, ukuze kuvinjelwe ngempumelelo ubungozi obufihliwe "bokudluliswa komzimba kusuka komunye nomuntu", uZhejiang uzohlola ukuhlolwa, ukulayishwa nokulayishwa, ukuthuthwa, ukugcinwa, ukucubungulwa nokuthengiswa kokudla okubandayo okungenisiwe okungenisiwe , ezinye izimpahla ezingenisiwe, imithwalo yabagibeli abangenayo nezinye izinto. Njengezisebenzi ezibalulekile zokuvimbela nokulawula ubhubhane, abasebenzi ekulayisheni nasekulayisheni nezinye izixhumanisi basebenzise ngokuqinile izidingo zokuvikela, baqhubeke nokwenza ukuqapha kwezempilo nsuku zonke, futhi bandise ukuvama kokuhlolwa kwe-nucleic acid. Ngasikhathi sinye, qinisa ukuhlolwa kwe-nucleic acid kwama-athikili wokungena kanye nodokotela abathintekayo.Inani lamasampula abasebenza, amasampula endatshana, namasampula ezemvelo ahlolwe esifundeni ngasinye (idolobha, isifunda) isonto ngalinye ngeke abe ngaphansi kwama-30.
Isithangami nabezindaba sazise ngokuphathwa okufanele kokudla kwamakhaza okubanda okuvela ku-nucleic acid-positive okusanda kungeniswa:
Ngo-21: 00 kusihlwa ngoDisemba 2, amasampula wokuqapha nsuku zonke wokudla okubandayo okuqoqwe yi-Yuhuan Center for Disease Control and Prevention e-Chengguan Central Vegetable Market athola isibonisi semilenze yengulube efriziwe engeniswe esuka eBrazil ehlole ukuthi inempilo i-coronavirus nucleic acid entsha. Ngemuva kokulandelwa uhlelo lwe- "Zhejiang Cold Chain", imikhiqizo ethintekayo yangena ezweni ngeShanghai Yangshan Port ngoSepthemba 28. Indawo yendawo yamukela ngokushesha izindlela eziphuthumayo njengokugcinwa kwempahla, ukuhlolwa kwabasebenzi nokuhlukaniswa, nokususwa kwendawo, futhi kwenziwa ukuhlolwa kwe-nucleic acid emvelweni kanye nabasebenzi abangaphandle kwemakethe ubusuku bonke. Izifunda nezifunda ezifanele zeTaizhou City ezibandakanyeka ekusakazweni komkhiqizo zenze ngokushesha ukulandelwa kwemithwalo kanye nabasebenzi, ukuphenya nokulahla. IHhovisi Lokuvimbela Nokulawula liphinde lazisa izifundazwe namadolobha angomakhelwane. Ngokwezibalo, iTaizhou City iqoqe amasampula ayi-174 enqwaba efanayo yemikhiqizo, ukufakwa kwangaphandle, nemvelo yangaphandle ethintekayo, kwakhonjwa abantu abangama-3304 abathintekayo. Imiphumela yokuhlolwa kwe-nucleic acid yonke yayingeyinhle.
NgoDisemba 5, iWuxi City, eSifundazweni saseJiangsu, yazisa inkampani ukuthi ukufakwa kwangaphandle kwenkomo yenkomo efriziwe engenamali engenayo engena yinkampani ihlolwe ukuthi inalo i-coronavirus entsha. UZhejiang wahlela ngokushesha i-Hangzhou, i-Ningbo, i-Huzhou, i-Jiaxing, i-Shaoxing, i-Zhoushan, i-Taizhou nezinye izindawo eziyisikhombisa ezibandakanyeka kuqoqwana olufanayo lwemikhiqizo ukwenza amasampula nokuhlola okuphuthumayo, ukuqapha impilo yabasebenzi kanye nokubulala amagciwane, futhi kwavalwa imikhiqizo yokulahlwa okungenangozi.Kusukela ngoDisemba 8, amasampula ayi-4,975 wemikhiqizo ehlobene nokufakwa emaphaketheni, imvelo yangaphandle kanye nabasebenzi sebesampuliwe futhi bahlolwa, futhi imiphumela yokuhlolwa kwe-nucleic acid yonke imbi.
Ukuze kuthuthukiswe indlela yokuphatha evaliwe yomkhiqizo wokudla okubandayo okungenisiwe, iZhejiang yenze "ukusebenza okugcwele" kokudla okunezinki ezibandayo okungenayo okungena ngamachweba eZhejiang noma ukugelezela eZhejiang ngamachweba eZhejiang ukugcinwa, ukucubungulwa (ukwenza isivumelwano esincane), nokuthengisa. Kuphethwe, akukho ukweqiwa ”ukuphathwa kwamalokhi avaliwe, kushiwo ngokusobala" abane akumele ", okungukuthi:
Labo abangenaso isitifiketi sokuhlolwa nokuhlukaniswa kwabantu abavunyelwe ukumakethwa, labo abangenawo umbiko we-nucleic acid test abavunyelwe ukumakethwa, labo abangenawo isitifiketi sokubulala amagciwane abavunyelwe ukuba bathengiswe, nalabo abangenayo ikhodi yomthombo elandelanayo ukudla akuvunyelwe ukuthi kuthengiswe, kunciphisa ngempumelelo ubungozi bokubhebhetheka komqedazwe kokudla okubandayo okungenisiwe okungenisiwe.
Ngaphezu kwalokho, iZhejiang izophinde iqinise ukuvimbela nokulawulwa kwegciwane elisha lomqhele kuzimpahla ezingenisiwe kanye nabasebenzi abahlobene nabo. Uma kubhekwa amacala asanda kwenziwa asekhaya, endaweni enamazinga okushisa aphansi ebusika, i-coronavirus entsha ingasakazeka ngezinhlelo zezinto ezingabandi ezibeka phambili izidingo ezintsha zomsebenzi wokuzivikela ngokomzimba. Ukugxila ekuqhubekeni nokwenza ngcono inqubo "yokuhlolwa komthombo nokulawulwa + kwe-hard core isolation + precision control intelligent" mechanism, i-Zhejiang isungule imihlahlandlela yokuvikela nokulawulwa kwama-athikili wokungena kanye nabasebenzi abahlobene nabo. Phakathi kwazo, zonke izimpahla ezingenisiwe ezithuthwa yizindiza zezimpahla zomhlaba wonke noma ngamachweba aya ezweni, ngaphandle kwempahla ethile yenqwaba, ziyaqapha futhi zibulawe amagciwane ngokuqondakalayo ezindleleni zokuhamba kanye nasekuhlanganisweni kwangaphandle kwemikhiqizo; ingaphandle elingaphandle lomthwalo ohloliwe wabagibeli abangena ngaphakathi lidluliswa ngebhande elihambayo lesikhumulo sezindiza Empeleni, ukubulala amagciwane ngomfaniswano kuyadingeka ngaphambi kokukhishwa. Umsebenzi wokubulala amagciwane ulandela imigomo yokuphepha, ukusebenza kahle, nokusebenza okulula, okungagcini nje ngokunciphisa ubungozi bokuthi igciwane elisha lomqhele lingeniswe ngezimpahla ezingenisiwe, kepha futhi kunciphisa izixhumanisi zokusebenza nezindleko ezingadingekile.
Ngokusho komuntu ofanele ophethe iHhovisi leProvince Leading Group for Prevention and Control, uZhejiang ubengenayo imibiko emisha eqinisekisiwe yendawo izinsuku eziyi-175 zilandelana; njengamanje kunamacala amane aqinisekisiwe alashwa esibhedlela, kanti amacala angama-27 okutheleleka ngaphandle kwezimpawu asengaphansi kokuhlolwa ngudokotela, onke avela phesheya kwezilwandle angena.
Ngenxa yokuvela kwamacala angavamile eManzhouli City of Inner Mongolia Autonomous Region, iZhalai Nuoer District of Hulunbuir City, Pidu District kanye naseChenghua District of Chengdu City eSifundazweni SaseSichuan, ngokusho kwezidingo zendlela eqondile yokulawulwa okuhlakaniphile kweZhejiang, labo bahlukaniswa njengabanobungozi obukhulu noma ubungozi obuphakathi Labo abeza eZhejiang bese bebuyela eZhejiang besuka esifundeni, uma bengakwazi ukunikeza isitifiketi esibi se-nucleic acid test zingakapheli izinsuku eziyi-7 ngaphambi kokufika lapho beya khona, noma “ikhodi yezempilo” eluhlaza ikhodi equkethe imininingwane, izobhekiswa endaweni ekhethiwe njengendawo yesevisi ephelele yendawo yokuhlola i-nucleic acid; Umphumela uba mubi Ungahamba ngokukhululeka nangokuhlelekile ngaphansi kwesilinganiso sokushisa okujwayelekile nokuvikelwa komuntu.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi isimo esiwumqedazwe eKashgar, iXinjiang besilawulwa, futhi iZhejiang yehliswe yaba sezingeni eliphansi kakhulu esifundeni, ayisadingi ukuthi abasebenzi abashiya iKalai naseZhejiang babuyele eZhejiang bayohlinzeka isitifiketi sokuhlolwa se-acid esibi. Kulabo ababuyela eZhejiang bevela eDongjiang Port District yaseTianjin City, Binhai New Area naseShailand Pudong New Area, eyehliselwe ezingozini eziphansi, isitifiketi sokuhlola i-nucleic acid esibi asisadingeki.
Selokhu kwaqubuka lo bhubhane, uZhejiang ubelanda ngokulandelana abasebenzi abasha abanegciwane elivela emikhunjini yamazwe elungiswe eHong Kong. Ukuqinisa ukuvimbela ubhadane kulo mkhakha kuyingxenye ebalulekile yokufakwa kwezokuvikela kwamanye amazwe. Ngokuya ngezimo zangempela, izindawo ezifanele ezisogwini zenze izindlela zokuphathwa kokulawulwa kokulawulwa kwemikhumbi kwamazwe omhlaba, kuhlanganiswe nocwaningo olunzulu kanye nokwahlulela emikhondweni yemikhumbi, amachweba e-berthing, amashifu ezisebenzi, njll. Ngokuya ngezidingo "zokuhlolwa okuphelele, ukuhlolwa kuqala, ukuhlolwa kuqala, ukuhlolwa kuqala, nokulungiswa kuqala", ukuhlolwa kwe-nucleic acid kwabasebenzi kumbozwe ngokugcwele ngaphambi kokuba umkhumbi wamazwe omhlaba ungene embonini ukuze ulungiswe; izinguquko zabasebenzi azivunyelwe ngaphambi kokuba imiphumela yokuhlolwa ikhishwe, futhi ukulungiswa akuvunyelwe ukusebenza. Ngasikhathi sinye, izinkampani ezilungisa imikhumbi kudingeka ukuthi zisungule uhlelo oluphelele lokubhalisa nokubika, futhi imisebenzi yokulungisa ingenziwa kuphela ngemuva kokubulawa.